FALANQEYN KOOBAN: Khilaafaadka Madaxda Soomaalida ee hadda taagan, Xaggee looga gudbayaa, maxaase ka dhalan kara? – Puntlandtimes
FALANQEYN KOOBAN: Khilaafaadka Madaxda Soomaalida ee hadda taagan, Xaggee looga gudbayaa, maxaase ka dhalan kara?
Khilaafaadka siyaasadda ee madaxda Soomaalida heerka uu haatan gaaray waa mid laba lixaadsanaya maalin ba maalinta ka damaysa ,waxaana muuqata suxul duub muuqda oo dhinacyada is hayaa ugu jiraan muruq muujin iyo buura isa saar.
Mucaaradka dawladda federaalka ayaa haatan u muuqda kuwa soo kabanaya ka dib imaantinka Xassan Shiikh Maxamud iyo khilaafka ka hdex qarxay maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka. Shakina kuma jiro in dalka haatan kusii siiqayo xaalad cakiran oo weerer iyo weerar celin ah, mana muuqato marjiciyad kala saari karta mucaaradka iyo dawladda dhexe , baarlamankana xaalkiisu haddaanu noqon nagu kala dara ayuu bura sidaa.
Is jiid jiidka xooga badan waxuu wiiqaysaa dhammaan dadaalada dib u kabashada dawladnimada heer federaal iyo heer maamul goboleedba , waxa uuna xaaladda ka dhigayaa mid cakiran, oo is hortaagi kara horumar laga sameeyo arrimaha amniga iyo dhismaha hay’adaha muhiimka u ah federaalaynta, kuwaas oo la’aantood aanay suurtagal noqon doonin dalka in doorasho laga qabto , ama dunida kalsooni laga helo .
Shacabka Soomaalida awood la sheego ama wax gacan ugu jiraa ma jirto, mana aha dad qiimayn dhexdhexaad ah oo caqli ku dhisan ku samayn kara xaaladaha taagan , marka laga reebo durbaan qolo walbaa la daba taagantahay qolada ay la fikirka tahay, tana waa fursad kale oo siyaasiyiinta heer federaal iyo maamul goboleed aad uga faa’idaysanayaan, waana midda sare u qaaday dacaayadaha hawada la siu marinayo iyo boor isku qarinta , xilli dalka dhiig bax ku socod.
W/QORAY: Falanqeeye Sare: Salim Said
Wada shaqaynta federaalka iyo maamul goboleedyadeedu waa muhiim.
Waana in laga gudbaa is eedaynta iyo kala qaybsanaanta laguna bedelaa wada shaqayn,is qancin,isu tanaasul.
Ma kala maarmaan oo dawlada dhexena maamul goboleedyada la’aantood waxba ma qaban karto,maamuladuna dawlada dhexe la’aanteed meel ma gaadhi karaan.